You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Food / အဆီ အ ကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ------
အဆီ ဆိုု တာ အမျိုး မျိုး အစားစား ရှိ ပါ တယ်။
အခြေခံ အား ဖြင့် ၄ မျိုး ရှိ တယ် လိုု့ ဆိုု ရ ပါ မယ်။
Saturated fats နဲ့ စ ကြ ရ အောင်
ဥပမာ ထောပတ်၊ (တိရစ ္ဆာန် မှ animal based )
ဝက်ဆီ၊ ( တိရစ ္ဆာန် မှ animal based )
အုုန်းဆီ ( plant based အုုန်းသီး မှ )
ထန်းဆီ Palm oil
ဒီ ဆီတွေ ရဲ့ သဘာဝ က room temperature မှာ အခဲ အနေ နဲ့ တည် ရှိ ပါ တယ်။
ဒီ ခဲ နေ တာ ကိုု ကြည့် ပြီး လူ တွေ က အရမ်း ကြောက် တတ် ကြ ပါ တယ်။စား လိုုက် ပြီး ရင် ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ ခဲ သွား ပြီး သွေး ကြော တွေ ပိတ် ကုုန် မှာ စိုုး လိုု့ ပါ တဲ့။
ဖြစ် နိုုင် လား ဆိုု တာ စဉ်းစား ကြည့် ကြ ရ အောင် -------
၁. Room temperature အခန်း အပူ ချိန် ဟာ ယေဘူယျ အား ဖြင့် 70 – 75F လောက် ရှိ ပါ တယ်။ ဒီ အပူ ချိန် မှာ အထက် ဖော် ပြ ပါ အဆီ တွေ ဟာ ခဲ နေ တတ် ပါ တယ်။သိုု့ ပါ သော် လည်း ကျွန်မ တိုု့ အား လုုံး ရဲ့ ခန္ဓာကိုုယ် အပူ ချိန် က ဖျမ်းမျှ ခြင်း အား ဖြင့် 97.8 ရှိ ပါ တယ်။ဒီ အပူ ချိန် မှာ အဆီ က ခဲ မ နေ ပါ။
၂. အဆီ ဟာ စား ပြီး ရင် အူ ထဲ သိုု့ ရောက် သော အခါ အဆီ ကိုု ချေ ဖိုု့ အစာချေ ဓာတ် တွေ ထွက် လာ ပါ တယ်။Gall bladder လိုု့ ခေါ် တဲ့ ဗဒ္ဓသည်း ချေ မှာ သိုု လှောင် ထား တဲ့ သည်း ချေ ရည် က ဆင်း ကျ လာ ပြီး အဆီ ကိုု စ တင် ချေ ပေး ပါ တယ်။
သူ က စ တင် ချေ လိုုက် တဲ့ ကြွင်း အဆီ ကိုု Pancreas ( မုုန့် ချို အိပ် ၊ သရက်ရွက်) က ထွက် လာ တဲ့ Lipase လိုု့ ခေါ် တဲ့ အစာချေ ရည် က ထွက် လာ ပြီး ကိစ္စ ကိုု အပြီး သတ် စေ ပါ တယ်။ချေ ပြီး တဲ့ အခါ အူ က နေ စုုတ် ယူ လိုုက် ပါ တယ်။
အခုု လိုု ရေး ပြ ရ တာ ဟာ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ အဆီ တွေ ခဲ သွား ပြီး ဒုုက္ခ ဖြစ် မှာ ကြောက် နေ ကြ တဲ့ လူ တွေ အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။
Saturated fats ကိုု ဘာ ကြောင့် စားသင့် သလဲ ဆိုု တော့ --------
ခန္ဓာကိုုယ် ကြီး ရှင် သန် နိုုင် ရန် အလုုပ်လုုပ် ဖိုု့ လိုု အပ် လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကလာပ်စည်း တွေ ရဲ့ နံရံ ဟာ ဒီ အဆီ နဲ့ ဆောက် တည် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကလာပ်စည်း နံရံ ကျန်းမာ မှ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ အရေး ကြီး တဲ့ လုုပ် ငန်း တွေ ဆောင် ရွက် နိုုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဥပမာ --- အာဟာရ တွေ ကိုု သော် လည်း ကောင်း၊ သတ္တုဓာတ် မျိုးစုုံ ကိုု လည်း ကောင်း၊ ကလာပ်စည်း အပြင် နဲ့ အတွင်း ပိုုင်း မျှ တ နေ ရန် ဆောင် ရွက် နေ ရ ပါ တယ်။
ကျွန်မ တိုု့ ရဲ့ ခုုခံ အား အဖွဲ့ အစည်း က လဲ ဒီ အဆီ မရှိ ရင် ကေင်း ကောင်း အလုုပ် မ လုုပ် နိုုင် ပါ။ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။
အဆီ စား တော့ လဲ တော်တော် နဲ့ မဆာ တော့ တာ မိုု့ ကိုုယ် အလေး ချိန် လဲ ကျ စေ ပါ တယ်။
အခုု နောက်ဆုုံး ပေါ် အယူအဆ အရ ကင်ဆာ ရောဂါ ကိုု တိုုက်ဖျက်ဖိုု့ အဆီ ဟာ အရေး ပါ တဲ့ နေ ရာ က နေ ရှေ့ ပြေး ဖြစ် နေ ပါ တယ်။
အဆီ စား ခြင်း ဖြင့် သကြားဓာတ် ကိုု လျော့ ချ နိုုင် ပြီး ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ပွား ဖိုု့ သကြား တည်း ဟူ သော ကင်ဆာ ရဲ့ အစာ ကိုု ဖြတ် ပြစ် နိုုင် လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခြား ခန္ဓာကိုုယ် အစိတ် အ ပိုုင်း တွေ က လဲ ကောင်း ကောင်း အလုုပ်လုုပ် နိုုင် ရန် အဆီ လိုု ပါ တယ်။
ကျွန်မ တိုု့ ဘိုုးစင်ဘောင်ဆက် ဝက်ဆီ စား လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။
အုုန်းဆီ၊ အုုန်း နိုု့ တိုု့ အလွန် စား ကြ သ ပေါ့။
ရှေး လူ ကြီး များ မှာ ယခုုခေတ် လူ တွေ လိုု ဆီးချို၊ နှလုုံး ရောဂါ ၊ သွေးတိုုး သိပ် မ ဖြစ် လိုု ကြ ပါ။
အခုုခေတ် လုူ တွေ လိုု ကိုုယ် အလေး ချိန် တွေ များ နေ တဲ့ ပြဿနာ လည်း မရှိ လှ ပါ။
အခုု ခေတ် မှာ အဆီ ကိုု ရှောင် ရငး် နဲ့ ဘဲ လူ အတော် များ များ ရောဂါ မျိုးစုုံ နဲ့ ဒုုက္ခ ဖြစ် ကြ တာ မျက်မြင် ကိုုယ်တွေ့ မိုု့ သုုတေသန လိုု မယ် မ ထင် ပါ။
ကဆီဓာတ် လိုု့ ခေါ် တဲ့ carbohydrate ကိုု အဆီ ဓာတ် နဲ့ လဲ လိုုက် ပါ လိုု့ တိုုက်တွန်း ရင်း ယနေ့ အတွက် ရပ် ပါ ဦး မည်။
မိတ်ဆွေ များ အား လုုံး မှန်ကန် တဲ့ အတွေး အခေါ် များ ရှိ နိုုင် ပါ စေ လိုု့ -----